Jadwal ma leedahay – JOORNAAL
Jadwal ma leedahay
May 9, 2017 May 9, 2017 ~ joornaal
Anagoo dhan waxaan rabnaa in waqtiga naloo badiyo. Waxaan rabnaa waqti badan in aan u helno waxa aan ku raaxeysano, waxa nafteenu dareemeyso in ay buuxdo oo wax muhiim ah qabsatay.
Hadana maalmaha iyo usbuucyada waxaa ay nagu dhaafayaan si xawli badan, waxaan is weydiinaa maxaan qabanay maalintii na dhaaftay, usbuucii na dhaafay, bishii na dhaaftay iyo weliba sanadkii na dhaafay.
Waxaan haysanaa sanad ka kooban 12 bilood oo ka kooban 52 usbuuc oo ka kooban 365 maalmood. Hadaba maadama uu sanadkii yahay maalmo kooban, waxaa xaqiiq ah in aanan qaban karin wax kasta oo aan dooneyno. Waxaan kaloo ogsoonahay in aan hilmaan badanahay. Hadaba su’aasha isweydiiska u baahan waxaa weeye: Maxaan dooranay in aan qabano sanadka 2017?
Ma ogtahay in uu jiro shay kugu saacidaaya in aad sanadka 2017 aad ka faa iideysato sida ugu wanaagsan. Waa shay la tijaabiyay oo shaqeynaya mudo ka badan hal qarni, waa shay ku jira gacantaada maanta. Wuxuu ku jiraa taleefoonkaaga, wuxuu ku jiraa computer kaaga, wuxuu ku jiraa iPad kaaga, wuxuu ku dheganyahay derbigaaga, wuxuu suranyahay meel kastoo aad ka shaqeyso ama wax ka barato. Wuxuu saaranyahay miis walba. Waxaa la yiraahdaa Jadwal am Kaalendar (Calendar).
Weligaa ma is weydiisay sidee loo isticmaala Jadwal ama Kaalendarka? Weligaa wax ma ku qortay? Weligaa ma raacday kaalendarkaaga waxa ku qoran? Weligaa ma ka fakartay sidii aad u kala hormarin lahayd waxa ku qoran kaalenderkaaga?
Jedwelkaaga ma wuxuu ku dhisanyahay waxa lagaa sugayo(Deadlines) mise wuxuu ku dhisanyahay waqtiyada aad firfircoonida kugu jirto sida morning (times you have energy).
Waa fiicantahay in aad jadwalkaaga ama kaalenderkaaga aad fiirfiiriso oo u isticmaasho sida ugu wanaagsan una kala hormariso sida uu sheygu muhiim kuugu yahay.
Dad badan ayaa waxaa ay isku qaldaan waxa la yiraahdo EMERGENSI (Emergency) iyo waxa muhiim ka ah (Important Priorities). Tusaale, nin ila shaqeeya ayaa waxaa uu caado ka dhigtay in uu iska seexdo oo maanta oo dhan wuxuu mashquul ku yahay Internet ka sida (Facebook iyo Youtube). Markay maalintu sii dhamaaneyso ayuu asagoo ordaaya isoo maraa oo dhahaaya arintaan waa muhiim waa in aan wax ka qabanaa oo waa emergency. Waxaan ku iraahdaa aniga emergensigaagu muhiim iima aha (Your emergencies are not my important priorites). Waayo asaga waa wax hadda in la qabto u ah waayo wuu ka seexday, laakiin aniga wixii emergency intaysan igu noqon ayaan soo qabasaday, tan waa tiisii, ma ahan taydii.
In badan haddii aadan jadwal iyo kaalendar sax ah diyaarsan oo ku socon waxaad is arkaysaa adiga oo maanta oo dhan la dagaalamaya emergensiyo waayo wixii muhiim ka ahaa waad ka seexatay ama dad kale emergensigooda ayaad ka shaqeyneysaa ileen adiga jadwal kuuma degsanee.
Marka maxaa noloshaada kuu ah muhiim (What are your important priorities?).
Aniga waxa jadwalkayga ugu horeeya waxaa weeye in aan sariirteyda goglo markaan hurdada ka kaco. Waa arin aan sameyn karo, waqti badan iguma qaadaneyso, waxayna iga dhigeysaa nin ku guuleystey arintii koowaad ee uu maanta qaban lahaa. Sidaas daraadeed waxaan ku xejiyaa shaygii kale ee muhiimka ii ahaa. Marka la gaaro 11:00am subaxnimo inta badan wax badan oo ii haray waaba yar yihiin. Waxaa ii soo hara waqti aan uga baaraan dego wixii aan berito qaban lahaa iyo wixii aan u sii diyaarsan lahaa. Internetka, Facebook iyo Whatsapp waxaan u daayaa 15 daqiiqo 3 dii saacadood mar oo ah inta aan shaaha yara cabaayo.
‹ PreviousCawaaqib Xumada Ka dhalata Akrasia
Next ›50 Shay oo nolosha kuu sahlaaya